यस्तो तरीका अपनाउनुहोस, कुनै पनि वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउनुहोस - Saptakoshionline
बुधबार, माघ ०७, २०७७
यस्तो तरीका अपनाउनुहोस, कुनै पनि वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउनुहोस
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २६, २०७४ समय: २:५५:२०
अहिलेको हाईटेक लाइफमा सबैसँग समार्टफोन हुन्छ । र मोवाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रदान गर्ने २ जी, ३ जी, फोर जी तथा वाईफाई मार्फत इन्टरनेटको प्रयोग नहुने त कुरै भएन । यस्तोमा कुनै पब्लिक (सार्वजनिक) वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लाग्यो भने त मज्जा नै हुने भयो । प्राय कलेज, सपिङ सेन्टर, सिनेमा हल, तथा होटेलहरुमा वाईफाई खुला रहन्छ । अर्थात् यदि यस्ता ठाउँमा जडित वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लाग्यो भने त तपाईको काम झन सजिलो हुने नै भयो ।
सार्वजनिक वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउन के गर्ने त ? यो आलेखमा हामीले केही यस्ता मोवाइल एपबारे उल्लेख गरेका छौं, जसको प्रयोगबाट तपाईलाई सार्वजनिक वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउन मद्दत पुग्ने छ ।
बेस्ट वाई–फाई नेटवर्क ह्याकर
यो एप बनाउने कम्पनीको दावी छ कि वाईफाईमा राखिएको जस्तोसुकै पासवर्ड पनि यो एपले तोडेर पत्ता लगाउँछ । अहिले कुनै पनि ओपन या क्लोज वाईफाई नेटवर्कको पासवर्ड पत्ता लगाउन यसको प्रयोग आमरुपमा गर्न थालिएको छ ।
हाऊ टु ह्याक वायरलेस नेटवर्क
यस एपलाई एक टुटोरियल जसरी लिन सकिन्छ । यसमा तपाईलाई इथिकल ह्याकिङ टिप्स सिकाइन्छ । साथै वाईफाई प्रोटेक्सनका लागि बनाइने सेकुरिटी एल्गोरिथमकलाई ह्याक गर्न पनि सिकाइन्छ ।
वाई–फाई ह्याकर बीएनजी पनि एक खास पासवर्ड ब्रेकिङ एप हो । यो एप इन्सटल गरेर तपाई कुनै पनि वाईफाई नेटवर्कको रेन्जमा जानुहोस्, यसलाई तपाईको काम सजिलो बनाइदिने छ ।
ह्याक वाई–फाई पासवर्ड
यो एप गुगल प्ले स्टोरमा निःशुल्क उपलब्ध छ । केही सेकेन्डमै यो एपको मद्दतबाट वाई–फाईको पासवर्ड पत्ता लगाउन सकिन्छ । यो एपलाई अहिलेसम्म १० भन्दा बढीले डाउलोड गरिसकेका छन् ।
फाइन्ड माई राउटर्स पासवर्ड
डिफल्ट पासवर्ड रिकभरी, म्यानुअल पासवर्ड रिकभरी तथा डिक्शनरी पासवर्ड रिकभरी जस्ता सुविधाको साथमा यो एप तपाईका लागि फाइदाजनक हुनसक्छ । यदि तपाईले नयाँ राउटर किन्नु भएको छ र त्यसको पासवर्ड थाहा छैन भनेपनि तपाईले यो एप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
यसरी लिनुहोस् ‘नागरिक एप’ बाट सजिलै प्यान नम्बर
सरकारले परीक्षणको रुपमा सार्वजनिक गरेको नागरिक एपबाट ‍परीक्षणकै चरणमा सहजै स्थायी लेखा नम्बर अर्थात प्यान दर्ता ह...
भेटियो कोरोनाभाइरसको सबैभन्दा प्रभावकारी उपचार !
विगत एक वर्षदेखि बढी समय भयो चीनको वुहान शहरबाट उत्पत्ति भई कोरोनाभाइरस संसारभरि नै फिजियो। विज्ञान र आधुनिक चिकित्साका...
७० हजार चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्न बाँकी
काठमाडौँ- एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले झण्डै ७० हजार अनुमतिपत्र वितरण गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । पछिल्लो...
काठमाडौं । तपाईको किबोर्डमा भएका कि का बारेमा बारेमा तपाईलाई केकति जानकारी छ ? नियमित रुपमा ल्यापटप तथा डेक्सटपमा तपाईले...
काठमाडौं । मानिसका अनेकन चाहना हुन्छन् । यात्राका क्रममा होस् वा घरमा बस्दा नै किन नहोस् । कानमा एयरफोन राखिरहनुपर्ने, ग...
सुबिसु बन्यो एमएएनआरएसमा हस्ताक्षर गर्ने नेपालकै पहिलो आईएसपी
काठमाडौं । सुबिसु एमएएनआरएस (म्यानुअल्ली एग्रिड नर्म्स फर राउटिङ सेक्युरिटी)मा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपालको पहिलो आईएसपी बन...